China Maitiro ekugadzira epurasitiki zvikamu Mugadziri uye Mutengesi | Mestech
Ku dhizaini epurasitiki zvikamukutsanangura chimiro, saizi uye kunyatso kujeka kwezvikamu, zvichibva nebasa iro zvikamu zvacho zvinotamba muchigadzirwa, uye mutemo wekuumba maitiro epurasitiki. Yekupedzisira kuburitsa ndeye madhizaini ekugadzira kweforoma uye epurasitiki chikamu.
Kugadzira zvigadzirwa kunotanga nekugadzira. Dhizaini yezvikamu zvepurasitiki zvinotarisa kuzadzikiswa kwechimiro chemukati, mutengo uye mashandiro echigadzirwa, uye zvakare inosarudza nhanho inotevera yekugadzirwa kweforoma, mutengo uye kutenderera, pamwe neiyo jekiseni kuumbwa uye post-kugadzirisa maitiro uye mutengo.
Zvikamu zvepurasitiki zvinoshandiswa zvakanyanya muzvigadzirwa zvakasiyana, zvivakwa uye hupenyu hwevanhu munharaunda yanhasi. Zvikamu zvepurasitiki zvinoda maumbirwo akasiyana uye mashandiro. Ivo vanoshandisa epurasitiki zvinhu uye zvivakwa zvavo zvakasiyana. Panguva imwecheteyo, kune nzira dzakawanda dzekugadzira zvikamu zvepurasitiki muindasitiri. Saka kugadzira zvigadzirwa zvepurasitiki harisi basa rakareruka.
Yakasiyana chikamu dhizaini uye zvinhu zvinogadzirwa zvakasiyana kugadzirisa. Kugadziriswa kwekuumbwa kwepurasitiki kunonyanya kusanganisira pazasi:
1. jekiseni Kuumbwa
Kune nzira dzakawanda dzekugadzira zvigadzirwa. Jekiseni Kuumbwa yakakurumbira kugadzira nzira, nekuti jekiseni kuumbwa 50% ~ 60% epurasitiki zvikamu zvinogadzirwa byb jekiseni kuumbwa, iyo inomhanya-mhanyisa yekugadzira kugona.
Ratidza kesi yezvimwe zvikamu zvepurasitiki zvatakagadzira:
Ipurasitiki yakavharidzirwa yekuona foni
Mapurasitiki emakesi emagetsi
Dzimba dzePurasitiki dzechiridzwa
Pazasi isu tinogovana zvakadzama maitiro ekugadzira zvikamu zvepurasitiki muzvinhu zvitatu
* 10 matipi ekugadzira epurasitiki zvikamu zvaunofanira kuziva
1.Determine chitarisiko dhizaini uye saizi yechigadzirwa.
Iri ndiro danho rekutanga mune rese dhizaini dhizaini. Zvinoenderana nekutsvaga kwemusika uye zvinodiwa nevatengi, sarudza kuoneka uye mashandiro ezvigadzirwa, uye gadzira mabasa ekuvandudza zvigadzirwa.
Zvinoenderana nebasa rekuvandudza, timu yekusimudzira inoenderera nehunyanzvi uye tekinoroji kugona kuongorora kune chigadzirwa, uye kuvaka iyo 3D chitarisiko modhi yechigadzirwa. Zvino, zvinoenderana nebasa rekuziva uye chigadzirwa chechigadzirwa, zvinokwanisika zvikamu zvinorongwa.
2.Siparadzanisa zvikamu zvega kubva pachigadzirwa dhizaini, sarudza epurasitiki mhando yerudzi rweplastiki zvikamu
Iyi nhanho ndeyekuparadzanisa zvikamu kubva kuiyo 3D modhi yakawanikwa mune yakapfuura nhanho uye wozvigadzira ivo pachavo. Zvinoenderana nezvinodiwa zvinoshanda zvezvikamu, sarudza yakakodzera epurasitiki mbishi zvinhu kana zvigadzirwa zvemidziyo. Semuenzaniso, ABS inowanzo shandiswa mu
goko, ABS / BC kana PC inofanirwa kuve nemimwe michina yezvinhu, zvidimbu zvakajeka sechigadziko chemwenje, mwenje post PMMA kana PC, giya kana kupfeka zvikamu POM kana Nylon.
Mushure mekusarudza izvo zvinhu zvezvikamu, iyo dhizaini dhizaini inogona kutanga.
3.Dudzira magadzirirwo emakona
Dhizaini angles anotendera kubviswa kwepurasitiki kubva muforoma. Pasina dhiraini makona, chikamu ichi chaizopa chakakosha kuramba nekuda kwekukonana panguva yekubviswa. Dhizaina makona anofanirwa kuve aripo mukati nekunze kwechikamu. Iyo yakadzika chikamu, iyo yakakura iyo yekunyora angle. Mutemo wakareruka wechigunwe ndeyekuti uve nedhigirii dhizaini rekona padiki. Kusina kukwana kwakaringana angle kungakonzera kutsemuka padivi pechikamu uye / kana hombe ejector pini mamaki (zvimwe pane izvi gare gare).
Dhizaina makona ekunze kwepasi: Iyo yakadzika chikamu, iyo yakakura iyo yekunyora kona. Mutemo wakareruka wechigunwe ndeyekuti uve nedhigirii dhizaini rekona padiki. Kusina kukwana kwakaringana angle kungakonzera kutsemuka padivi pechikamu uye / kana hombe ejector pini mamaki (zvimwe pane izvi gare gare).
Kazhinji, kuti uve nechitarisiko chakanaka pamusoro, kugadzirwa kunoitwa pamusoro pezvikamu. Iyo madziro ane machira akaomarara, kukwesana kwakakura, uye hazvisi nyore kuibvisa kubva mudumbu, saka inoda yakakura kona yekudhirowa. Iko kurira kwakashata ndiko, kona hombe yekunyora inodiwa.
4.Define rusvingo ukobvu / yunifomu ukobvu
Solid chimiro kuumbwa hakudiwe mujekiseni kuumbwa nekuda kwezvikonzero zvinotevera:
1) .Kutonhora nguva yakaenzana nekwere yemadziro ukobvu. Yakareba nguva yekutonhora yakasimba ichakunda hupfumi hwekugadzirwa kwakawanda. (murombo conductor wekupisa)
2) .Chikamu chakakora chinodzikira kupfuura chikamu chakatetepa, nokudaro chinounza musiyano shrinkage zvichikonzera warpage kana kunyura mucherechedzo nezvimwe (shrinkage maitiro epurasitiki uye pvT maitiro)
Naizvozvo isu tine wekutanga mutemo wepurasitiki chikamu dhizaini; kusvika pese panogona kukora madziro kunofanirwa kuve yunifomu kana kugara uchibuda muchikamu. Ukobvu hwemadziro uhu hunodaidzwa nezita rekuti madziro ukobvu
Kana paine chero chikamu chakasimba muchikamu, chinofanirwa kuitwa chisina chinhu nekuunza musimboti. Izvi zvinofanirwa kuona yunifomu yemadziro ukobvu kutenderedza moyo.
3) Ndeapi mafungiro ekutora danho rekukora madziro?
Inofanirwa kuve gobvu uye kuomarara zvakakwana kuita basa. Kukora kwemadziro kunogona kuve 0.5 kusvika 5mm.
Inofanirwa zvakare kuve yakatetepa zvakakwana kuti itonhorere nekukurumidza, zvichikonzera yakaderera chikamu chehuremu uye nepamusoro kugadzirwa.
Chero misiyano yeukobvu hwemadziro inofanira kuchengetwa sepashoma sezvinobvira.
Chikamu chepurasitiki chine akasiyana masendimita ukobvu anozoona akasiyana mareti ekutonhora uye akasiyana shrinkage. Mumamiriro ezvinhu akadaro kuwana kushivirira padyo kunova kwakaoma uye kazhinji kusabatika. Iko kusiyanisa kwemadziro kwakakosha, iko kuchinja pakati pezviviri kunofanirwa kuve zvishoma nezvishoma.
5.Connection dhizaini pakati pezvikamu
Kazhinji tinoda kubatanidza mateko maviri pamwechete. Kuti vagadzire mukamuri rakakomberedzwa pakati pavo kuti vaise zvemukati zvinoriumba (PCB musangano kana mashandiro).
Iwo akajairwa marudzi ekubatanidza:
1). Snap nezvikorekedzo:
Kubata hook kubatanidza kunowanzo shandiswa mune zvidiki uye zvepakati saizi zvigadzirwa. Hunhu hwayo ndeyekuti hoko dzinokanda dzinowanzoiswa kumucheto kwezvikamu, uye saizi yechigadzirwa inogona kuitwa diki. Kana yaunganidzwa, yakavharwa yakanangana pasina kushandisa chero maturusi akadai se screwdriver, ultrasonic welding die nevamwe. Izvo zvinokanganisa ndezvekuti hoko dzinokachidza dzinogona kukonzera kuumbwa zvakanyanya kuomarara. Iyo inotsvedza michina uye yekusimudza mashandiro anodiwa kuti uone iyo yekukochekera hoko yekubatanidza uye nekuwedzera iyo mold mutengo.
2). Screw majoini:
Screw majoini akasimba uye akavimbika. Kunyanya, iyo yekumisikidza + nati yekumisikidza yakavimbika kwazvo uye yakasimba, ichibvumira akawanda disassemblies pasina kutsemuka. Iyo sikuruu yekubatanidza inokodzera zvigadzirwa zvine hombe yekukiya simba uye yakawanda kupunza. Izvo zvinokanganisa ndezvekuti sikuruu yekoramu inotora yakawanda nzvimbo.
3). Kuisa vakuru:
Kuisa mabosi kubatana ndiko kugadzirisa zvikamu zviviri nekubatana kwakasimba pakati pevakuru nemaburi. Iyi nzira yekubatanidza haina kusimba zvakakwana kubvumira kukatanura zvigadzirwa. Izvo zvisina kunaka ndezvekuti simba rekuvhara richaderera sezvo nguva yekukatanura ichiwedzera.
Ultrasonic Welding ndeyekuisa izvo zviviri zvikamu mukati meiyo ultrasonic muforoma uye kusanganisa iyo yekubatana pamusoro pechiito cheiyo ultrasonic yekutengesa muchina. Saizi yechigadzirwa inogona kuve diki, iyo jekiseni muforoma iri nyore, uye kubatana kwacho kwakasimba. Iko kusakosha ndiko kushandiswa kweiyo ultrasonic chakuvhuvhu uye yeiyo ultrasonic yekutengesa muchina, saizi yechigadzirwa haigone kuve yakanyanya kukura. Mushure mekuputsa, iyo ultrasonic zvikamu haigone kushandiswa zvakare.
Undercuts zvinhu zvinokanganisa kubviswa kweimwe hafu yeforoma. Undercuts inogona kuoneka chero chero kupi mukugadzirwa. Izvi hazvigamuchirike, kana zvisiri zvakanyanya kupfuura kushomeka kwedonhwe rekona pachikamu. Nekudaro, zvimwe zvekucheka pasi zvinodikanwa uye / kana zvisingadziviriki. Mune izvo zviitiko, zvakakodzera
undercuts inogadzirwa nekutsvedza / inofamba zvikamu muforoma.
Ramba uchifunga kuti kugadzira undercuts kunodhura kana uchigadzira iyo mold uye inofanirwa kuchengetwa padiki.
Mbabvu mupurasitiki chikamu chinovandudza kuomarara (hukama pakati pemutoro nechikamu chikamu kutsauka) kwechikamu uye kunowedzera kuomarara. Inowedzerawo kugona-kwekugona sezvo ivo vachimhanyisa kuyerera kuyerera nenzira yembabvu.
Mbabvu dzinoiswa padivi pekutungamira kwekunyanyisa kunetseka uye kutsauka pane asiri-ekuonekwa maficha echikamu. Kuzadza muforoma, shrinkage uye ejection zvinofanirwawo kukanganisa sarudzo dzekuisa mbabvu.
Mbabvu dzisingabatana nemadziro akamira hadzifanirwe kupera nekukurumidza. Zvishoma nezvishoma shanduko kune zita remadziro inofanirwa kudzora njodzi yekumanikidzwa kwepfungwa.
Mbabvu - kukura
Mbabvu dzinofanirwa kunge dziine zviyero zvinotevera.
Kukora kwembabvu kunofanira kunge kuri pakati pe0.5 kusvika 0.6 nguva yezita remadziro ukobvu kudzivisa kunyura.
Kukwirira kwembabvu kunofanirwa kuve ka2,5 kusvika katatu kakapetwa zita remadziro ekureba
Ribhi inofanirwa kuve ne0.5 kusvika 1.5-degree dhizaini yekumisikidza kufambisa ejection.
Rib ringi rinofanira kunge riine nharaunda 0.25 kusvika 0.4 nguva yezita remadziro ukobvu.
Kureba pakati pembabvu mbiri kunofanirwa kuve maviri kusvika katatu nguva (kana kupfuura) yezita remadziro ukobvu.
Kana panosangana nzvimbo mbiri, inoita kona. Pakona, ukobvu hwemadziro hunowedzera kusvika ku1.4 zvakapetwa pazita remadziro ukobvu. Izvi zvinoguma nemusiyano shrinkage uye yakaumbwa-mukutambudzika uye yakareba kutonhora nguva. Naizvozvo, njodzi yekutadza kushanda inowedzera pamakona akapinza.
Kugadzirisa dambudziko iri, makona anofanirwa kuvezwa neradiyo. Radius inofanira kupihwa kunze pamwe nekunze. Usambofa uine kona yemukati yakapinza sezvo ichisimudzira kutsemuka. Radiyo inofanirwa kuve yakadaro iyo inosimbisa kune inogara madziro ukobvu mutemo. Zvirinani kuve nenharaunda ye 0.6 kusvika ku0.75 zvakapetwa pamadziro pakona. Usambofa uine kona yemukati yakapinza sezvo ichisimudzira kutsemuka.
9.Screw shefu dhizaini
Isu tinogara tichishandisa screws kugadzirisa maviri hafu kesi pamwechete, kana kusungira PCBA kana zvimwe zvinongedzo muzvikamu zvepurasitiki. Saka sikuru mabhosi ndiwo mamiriro ekumisikidza mukati uye akagadziriswa mativi.
Iyo screw boss ndeye cylindrical muchimiro. Mukuru webasa anogona kubatanidzwa pazasi naamai chikamu kana chingave chakabatanidzwa padivi. Kubatanidza padivi kunogona kukonzeresa chikamu chakakora chepurasitiki, chisingadiwe sezvo chichigona kukonzera mucherechedzo uye kuwedzera nguva yekutonhora. Dambudziko iri rinogona kugadziriswa nekubatanidza bhosi kuburikidza nembabvu kumadziro edivi sezvakaratidzwa mumufananidzo. Bhosi rinogona kuitwa rakaomarara nekupa mbichana mbichana.
Screw inoshandiswa pana shefu kusungira chimwe chikamu. Kune tambo inogadzira mhando yezvipenga uye yekutsika yekucheka mhando yezvikwiriso. Thread inogadzira screws inoshandiswa pane thermoplastics uye tambo yekucheka screws inoshandiswa pane inelastic thermoset epurasitiki zvikamu.
Thread inogadzira sikuruu inoburitsa tambo dzevakadzi pamadziro emukati maboss nekutonhora kuyerera - mapurasitiki akaremara munharaunda pane kutemerwa.
Screw boss inofanirwa kunge yakaenzana kuti isabate sikuruu yekuisa masimba uye mutoro wakaiswa pane sikuru iri mushando.
Saizi yeiyo yakabereka inoenderana nesikuru yakakosha pakurwisa tambo kubvisa uye sikuruwa kudhonza.
Bhosi rekunze dhayamita rinofanira kunge rakakura zvakakwana kuti ridzivirire kushushikana kwepaop nekuda kwetambo inogadzirwa.
Bore ine dhayamita yakati kurei pakunopinda zororo kwehurefu hupfupi. Izvi zvinobatsira mukutsvaga sikuru usati watyaira mukati. Izvo zvakare zvinoderedza kushushikana panoperera panoperera shefu.
Vagadziri vePolymer vanopa madhairekitori ekumisikidza kukura kwevakuru pazvinhu zvavo. Screw vagadziri vanopawo nhungamiro yeiyo chaiyo yekubereka saizi yeiyo sikuru.
Kuchengetedza kunofanirwa kutorwa kuti kuve nechokwadi chakasimba simbi majoini akakomberedza sikuru yakazvara mune boss.
Kuchengetedza kunofanirwa kutorwa kudzivirira kuumbika-mukutambudzika mumabhosi sezvo ichikundikana pasi pechisimba nharaunda
Kufinhwa muboss kunofanirwa kuve kwakadzika kupfuura iko kudzika kwetambo.
Dzimwe nguva, kuti tiwane chitarisiko chakanaka, isu tinowanzo ita kurapwa kwakasarudzika pamusoro pepurasitiki kesi.
Zvakadai se: mameseji, yakakwira glossy, pfapfaidzo kupenda, laser yekuveza, kupisa kutsika, electroplating uye zvichingodaro. Izvo zvinodikanwa kuti utarise mune dhizaini yechigadzirwa pamberi, kudzivirira kunotevera kugadziriswa hakugone kuwanikwa kana saizi shanduko inokanganisa chigadzirwa chechigadzirwa.
Pashure: Kugadzira chakuvhuvhu
Zvadaro: Die vachikanda anoumba